fnynolonynny nentim-pnyhnyrnyznynny eny nyn-dnylnynny jiro nymin'ny LED ireo diny ny fitnyhinynny nny ny ozona - Ynyngzhou Lnyngxu Lighting teknolojia Co., Ltd.
Ny drafitra jiro azo avy amin'ny arabe dia tokony hodinihina:
1. Ny fitahirizana angovo, izany hoe, ny herin'ny herinaratra ao ambanin'ny hazavana mitovy ihany, ny hazavana antonony dia tsy mety ho ny hazavana ambany indrindra amin'ny tany fotsiny! Ny halavan'ny habaka dia manana vina mialoha ny fiara ho avy lavitra, mba hisorohana ny lozam-pifamoivoizana! Iza amin'ireo jiro LED mandeha ankehitriny no mety ho tratrarina? Ny hoe manangona angovo amin'ny vidin'ny fanazavana. Fa nahoana izany? Raha ny marina dia ny jiro Na dia loharano maivana tena mahomby, 100-200lm / W, ary ny LED dia tsy misy tombony amin'izany ankehitriny!
2. Ny fifehezana ny mari-pana ny tontolo iainana, jiro an-dalambe ampiasaina ivelany, mba tsy hahavita ny rano sy ny vovoka, koa ny fanilo sy ny jiro dia tsy maintsy tombo-kase, tombo-jiro ny jiro sy ny jiro amin'ny mari-pana ny rano amin'ny haizin'ny toetrandro mihoatra ny 100 degre, ny LED mba miasa ao amin'ny tontolo hafanana toy izany, arakaraka ny toetran'ny fizarana misy ankehitriny ny marika, ny jiro sy ny jiro na dia mila fanatsarana hafa aza, dia tokony ho faty ny jiro na hamono. Ny tatitra momba ny fanadinana nataon'ny orinasa jiro an-dalambe dia natao tamin'ny mari-pana tao amin'ny efitrano 20 na 25 degre, izay tsy tena hita taratra ny faharatsian'ny tontolo fampiasana.
3. Ny fidoboky ny zavona aloha hatreto, tsy mbola misy fitrandrahana maivana afa-tsy ny fahafahan'ny sodium sodera!
4 fanoherana ny moka, jiro an-dalambe ampiasaina amin'ny ivelany, indrindra fa raha voasarona ny bibikely, dia hisy fiantraikany lehibe amin'ny voka-maivana, ary ny moka amin'ny hazavana somary lava indrindra, toy ny, ny zavamanana, ny lelafo, ny sodium jiro habetsahan'ny habetsahana mba hialana amin'izany vokany mba hisorohana trangan-javatra iray, ary ny "LED" tsy azo ihodivirana!
5. Ny fisorohana ny horohoron-tany sy ny rivo-doza dia mila jerena. Amin'izao fotoana izao dia maro ny tetikasa fanoloana jiro an-dalambe no manolo tsotra ny mitazona ny làlana nentim-paharazana miaraka amin'ny mpamita jiro LED, izay tena mampidi-doza.
Raha fintinina: LED ho loharanom-pahazavana maivana haingam-pandeha mavesatra vaovao, amin'izao fotoana izao amin'ny fanoloana ny jiro tsy mampino, ny jiro fluorescent dia misy tombony tsy azo ovana, fa amin'ny fanoloana ny jiro sodium ankoatry ny fampisehoana loko noho ny sodium matanjaka, tsy misy tombony ! Ny LED dia tsy manan-kery, azafady mba hamafiso ny fijeriko eto ambony. Fahazavana eny an-dalambe ho jiro ampahibemaso, mifandraika amin'ny fiarovana ny ain'olona an'arivony, fahasambarana an-tapitrisany maro, azafady eritrereto! Raha nosoloina avokoa ny lalana (indrindra ny lehibe indrindra) dia hitombo be ny loza! Raha ny toetr'andro mivaingana be dia be ny jiro maty na simba matevina!